Akụkọ banyere Hans Brinker | Njem zuru oke
Gwa ndị XIX narị afọ na North America otu n'ime akwụkwọ ụmụaka kasị ewu ewu bụ Hans Brinker ma ọ bụ ọlaọcha skates, dere Mary MapesDodge. Ezigbo akwụkwọ kacha mma maka ụmụaka.
N’oge ahụ, e nweghị fim, egwuregwu vidio adịghịkwa, o nweghịkwa tiivi. Enwere naanị akwụkwọ na ya ọtụtụ ụdị dị iche iche maka ndị dị iche iche. Dị ka o kwesịrị ịdị, nke a ka bụ eziokwu, mana ugbu a ịde ederede nwere nnukwu asọmpi. Ma narị afọ abụọ gara aga nke a akwụkwọ ọgụgụ ụmụaka ọ bụ ihe ama ama dika ihe omimi nke Harry Potter bụ taa.
1 Onye edemede nke Hans Brinker
2 Hans Brinker, akụkọ
3 Hans Brinker ma ọ bụ ọlaọcha skates, mbipụta ahụ
Onye edemede nke Hans Brinker
Akwụkwọ ọgụgụ a bipụtara na 1865 site na america Mary Mapes Dodge. A mụrụ Mary na Jenụwarị 1831, na New York City. Ọ bụ nwa nwanyị nwe ụlọ na onye nkuzi, onye na-echepụta ihe na kemịkal, ya mere ọ gụrụ ezigbo akwụkwọ. Ọ dị obere, mana ka oge na-aga, ọ lụrụ onye ọka iwu, William Dodge, mgbe ọ dị afọ 21, na-ewere aha ikpeazụ ya dị ka ọdịnala si dị.
N'ime afọ anọ sochirinụ ọ mụrụ ụmụ nwoke abụọ na na 1858 di ya gbahapụrụ ya na-egosi mmiri riri oge ụfọdụ mgbe e mesịrị. A) Ee, ọ dị afọ iri abụọ na asaa nwụrụ soro umuaka abuo kwado. Ndị mụrụ ya nyeere ya aka na n'afọ sochirinụ enweghị ndide edemede ya mịpụtara mkpụrụ mgbe dee ma bipụta magazin abụọ na obere akụkọ dị mkpirikpi.
Otu ubochi ha gwara ya ka o dee akuko, obughi obere akuko, ya bu na amuru ya Hans onye igbo. Ọ dị ka ọ bụ mmụọ nsọ sitere n'usoro akụkọ nke John L. Motley dere, Ubochi omumu nke Dutch Republic, site na 1856, e Akụkọ banyere Netherlands.
Nke bụ eziokwu bụ na Mary agabeghị na Netherlands, mana ọ chọpụtakwara obere ihe gbasara obodo ahụ wee mee ụdị nyocha site n'ịgba ndị agbata obi ya ajụjụ ọnụ bụ ndị Dutch. Ọ bụ ezie na mgbe ị gụrụ akụkọ ahụ, ị ​​gaghị ahụ ọtụtụ aha Dutch, kama German.
Mana Mary mere ihe omume ụlọ akwụkwọ ya nke ọma, yabụ akwụkwọ ọgụgụ ahụ nwere ezigbo ozi gbasara ọdịnala ndị America na-amaghị. Ọ bụ ya mere o ji wee nwee ọfụma n’ezie ọ bụ ahịa kachasị mma n'afọ mbụ nke akwụkwọ ya, ihe ọ rụzuru tupu mgbe ahụ Enyi anyinke Charles Dickens dere. Kemgbe ahụ ọ na-abanye ma pụọ ​​na pịa ma taa ị nwere ike ịchọta ya maka gụọ n'ịntanetị.
Enwere mmegharị ihe nkiri? Ee, n'eziokwu enwere ọtụtụ mmegharị na ụdị dị iche iche. Ya bụ, na 1958 a egwú ndụ igwe onyonyo, na 1962 a Ihe nkiri Disney TV nke egosiri na uzo abuo; na 1969 NBC mere egwu ọzọ, na 1998 Channel Disney mere ezigbo mmegharị nke ihe nkiri mbụ ahụ, nke edoziri na Los Angeles, na n'ikpeazụ, na 2002 a russian film film, Skate ọla ọcha, a free version nke akụkọ.
Netherlands etinyewokwa ego na akụkọ ihe mere eme nke ọma enwere ụfọdụ akpụrụ akpụ ebe a na ebe a, n’agbanyeghi n’otu akuku nke Atlantic akuko amaghi nke oma. Mana ka enwere, enwere ụlọ mbikọ na Amsterdam a na-akpọ Hans Brinker.
Hans Brinker, akụkọ
Akwụkwọ akụkọ ahụ na-akọ akụkọ banyere nwatakịrị nwoke 15 dara ogbenye ma na-akwụwa aka ọtọ nke bi na Amsterdam na nne ya na nwanne ya nwanyị. Obodo mgbe nile esetịpụ a ịgba ọsọ ice na December na otu n’ime ọwa mmiri nke obodo a ma ama. Utịp bụ ụzọ ọla ọcha skates.
N'ezie, isonye bụ ihe Hans chọrọ karịa, mana ịda ogbenye nwere ohere ole na ole ya na osisi skate ya dị umeala. Ọzọkwa, iji nye akụkọ ahụ ụda olu dị mwute, Nna Hans echefubeghị. Otu ụbọchị, ka ọ na-arụ ọrụ, ọ dabara na mmiri ma kemgbe ahụ ọ dịrị ndụ na-enweghị ncheta na ọkara n'ọhụụ, ọkara na iwe ọkụ, na-amanye ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ ịrụ ọrụ iji dịrị ndụ.
Ma Hans bụ ezigbo nwa nwoke, ọ hụkwara nna ya n’anya, n’ihi ya otu ụbọchị, ọ gara hụ dọkịta na-awa ahụ a ma ama, Dr. Boekman, onye dọkịta lara ezumike nká na di ya nwụrụ nke nwere nwa nwoke na-efu efu. N'ịbụ onye àgwà nke nwata 15 dị afọ juru ya anya, ọ kwetara ileta nna ya, mgbe ọ nyochachara ya, ọ na-enye nchoputa ya: nwere mgbagha ma chọọ ịwa ahụ.
O doro anya, ịwa ahụ dị oke ọnụ ọ gaferelarị nke ezinụlọ ya dara ogbenye. Dọkịta na-awa ahụ kpebiri na ọ gaghị akwụ ụgwọ maka ịwa ahụ, mana ka Hans na-ahụ na ọ chọrọ ego na naanị ohere iji nweta ya sonye na agbụrụ ma merie skates ọla ọcha. N’ikpebisi ike, Hans na-emefu obere ego ya wee zụta skates abụọ, otu maka onwe ya na onye ọzọ maka nwanne ya nwanyị Gretel, onye ga-esonyekwa.
A na-eji ígwè emepụta skates ọhụrụ ahụ ma dị mma karịa nke ochie ejiri osisi mee. Thebọchị ukwu nke agba ọsọ ice na-abịa. Gretel meriri n'umu umuaka ma merie ya. N'aka nke ya, Hans nwere ohere imeri mana tụfuru otu enyi ya chọrọ ego karịa ka ọ chọrọ. Nwata nwoke nwere obi eziokwu ma nwekwaa obi.
N'ikpeazụ, Dr. Boekman nwere ike ịrụ ọrụ ahụ hans papa adighaala ozo. Site na nke a, ọnọdụ ezinụlọ na-akawanye mma, mana ọ na-akawanye mma karịa ma ha chọta akụ zoro ezo. Ugboro abụọ nke chioma na dị ka ego, dọkịta na-amaghị ebe nwa ya nwoke nọ na-achọta ya.
Gịnị banyere nwata nwoke nwere obi ike ma na-akwụwa aka ọtọ? N'ikpeazụ dọkịta na-enyere ya aka ịbanye na ọrụ ọgwụ ka Hans ghọrọ dọkịta a ma ama. Oge ngwụcha obi ụtọ, ọ bụghị ya?
Hans Brinker ma ọ bụ ọlaọcha skates, mbipụta ahụ
Akwụkwọ akụkọ mbụ na Bekee ebipụtara ya na 1865 ma ree ya nke ọma. N'oge ahụ, ụmụaka enweghị ụdị ntụrụndụ ọ bụla ọzọ karịa egwuregwu na akwụkwọ, ndị nwere ike ịgụ ma ọ bụ gụọrọ ha hụrụ nnukwu oge na akụkọ ndị a.
Akwụkwọ akụkọ Mary Mapes Dodge nyere ụmụ America a ụwa ọhụrụ: ịkwọ ụgbọ mmiri, ọdịbendị mba ọzọ dị ka Dutch na ezigbo akuko nwere obi uto.
N'ihi ya, Dutchdị ụdị ice a na-asụ Dutch bidoro na-ewu ewu na United States na na mgbasa ozi nke na-amalite itolite aka na mmepe mba. Oge gafere ma taa Hans Brinker dị ka ọsọ ọsọ skater.
Chee na akwukwo a bụ ihe dịkọrọ ndụ nke Nwa nwanyis, nke Louise May Alcott ma ọ bụ site n’aka Clelọ Uncle Tomnke Harriet Beecher Stowe dere. Womenmụ nwanyị atọ, ndị edemede atọ nke narị afọ nke XNUMX na akwụkwọ ndị ntorobịa.
N'oge na-adịghị anya, ikekwe otu n'ime akwụkwọ ndị ama ama na akwụkwọ ndị ntorobịa America, Tom Sawyer na Huckleberry Finn, ga-abịarute ịgbanwe usoro nke ụdị North America na akwụkwọ edemede ruo mgbe ebighị ebi. Mana nke mbu, okwesiri icheta na umu nwanyi ato dere akwukwo ndi edere ede.
You na-eche ma akwụkwọ a nwere ntụgharị asụsụ Spanish? N'ezie! Enwere mbipụta n'asụsụ Spanish, French na Italiantalian na dịka m kwuru, naanị ị na-asọgharị ma ị ga-ahụ ụdị ntanetị ịmara akụkọ ahụ, gụọ ya ma nwee ekele maka ya taa, ihe karịrị otu narị afọ gachara.
omenalaakụkọ ihe mere emeTurismo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Akụkọ banyere Hans Brinker